CNC hwokugaya hwakabvira (3-4 akabatana) - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Precision Machining Inopa CNC Zvigadzirwa zvemuchina zvikamu zvine zvakanyanya kushivirira. Hatina mberi CNC azvikuya michina kubva zvavo 3 akabatana kusvika 5 akabatana. Se ISO9001: 2015 uye TS 16949: 2009 yakanyoreswa CNC zvikamu zvekugadzira kambani, isu hatisi kungo tarisa kugadzira asi zvakare tinopa yakanaka mhando CNC Milling zvikamu.
Hazvina mhosva kuti zvigadzirwa zvakaomarara sei kana kuti zvakakura sei, mainjiniya edu ane hunyanzvi anokwanisa kuzvigadzira nenzira imwechete uye nemhando. Zvese zvaunotarisira kubva kune ichangoburwa CNC Milling muchina inogona kuitwa neK-Tek Machining Co, Ltd.
Nokushandisa ichangoburwa CNC hwokugaya hwakabvira Technology, kugadzira pamwe zvikuru kushandisa michina, kusiyanisa kunogona kuderedzwa uye kudzorwa kure.
Chii chinonzi CNC hwokugaya hwakabvira?
CNC hwokugaya hwakabvira zvikuru nevanhu machine muitiro kubvisa zvinhu. Iwo anotenderera anotenderera anodikanwa kana uchibvisa zvinhu. Iyo yekucheka chishandiso chekucheka chine meno akapinza anotenderera paanomhanya zvakanyanya. Machira achange achicheka kana uchidyisa iyo yekushandira mumucheka unotenderera. Nenguva dzekushanda, chimiro chinodiwa chinogona kuitwa. Kazhinji muchina wekugaya une matatu akabatana: X, Y uye Z. Kugadzira zvikamu zvakaoma, 5-axis, 6-axis ichashandiswa.
K-Tek Precision Machining inyanzvi yeCCC yekugaya fekitori. Tine azvikuya muchina kubva 3-akabatana kusvika 5-akabatana. Yedu nyanzvi mainjiniya anogona nguva dzose kuwana mhinduro kuburitsa yakaoma yekugaya zvikamu zvemhando yepamusoro.
• Maumbirwo: Sezvo zvinodiwa nevatengi
• Chikamu chemukati: 0.5-1300mm
• Chinyorwa: Brass, Aluminium, Alloy simbi, Stainless simbi nezvimwe.
Kushivirira: +/- 0.005mm
• Inogona kugadzirwa nekutara kana sampuli
Diki uye hombe vhoriyamu batch
K-Tek inogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, otomatiki, mota, zvekurapa, simba nyowani nedzimwe nzvimbo. Takapfuura iyo ISO9001: 2015 certification, parizvino tine vashandi mazana maviri. Chigadzirwa yedu 20% aivigirwa kuJapan, 60% aivigirwa kuna Europe uye America, tinogona kukupa yepamusoro uye yemakwikwi mutengo. Zvinhu zvedu zvakajairika isimbi isina chinhu, aluminium, mhangura, yakaderera kabhoni simbi, mapurasitiki einjiniya uye mamwe marudzi esimbi simbi, isu tinogona zvakare kupa kupisa kurapwa uye kwakasiyana kwepamusoro kurapwa kwevatengi: